ပင်မစာမျက်နှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး သတင်း
၁။ ThuTaMyay ဆိုတာ ဘာလဲ?
ThuTaMyay ဆိုတာ အွန်လိုင်း သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် VAS Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွားလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တိကျသေချာသော သတင်းများ၊ နေ့စဉ်ကုန်စည်ဈေးနှုန်း၊ မိုးလေဝသ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပရေးရာ အစရှိသော အသုံးပြုသူများအတွက် သေချာပေါက် အကျိုးရှိစေမည့် အစီအစဉ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
၂။ ThuTaMyay ၀န်ဆောင်မှုကို မည်သို့ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
(၁) ဦးစွာ ပထမ MPTဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဖြင့် 8834 သို့ TTM ဟု SMS ပေးပို့ရပါမယ်။
(၂) ၀န်ဆောင်မှု အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်စာနှင့်တကွ ThuTaMyay application ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန် link ပါသော SMS တစ်စောင် သင့်ဖုန်းထဲသို့ ၀င်လာပါမည်။
(၃) Application မရှိသေးပါက Download link ကိုနှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး ဖုန်းအတွင်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
(၄) Application ကိုဖွင့်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပြီး ၀င်ရပါမယ်။
(၅) ထည်သွင်းလိုက်သေး ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဂဏန်း ၄ လုံးပါသော OTP Code နံပါတ် ပါ၀င်သည့် SMS တစ်ခု ၀င်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၆) ထို့နောက် SMS တွင်ပါ၀င်သော OTP Code နံပါတ်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး ThuTaMyay Application ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၃။ ThuTaMyay ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမလဲ
8834 သို့ STOPTTM ဟု SMS ပေးပို့ရပါမယ်။
၄။ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေကို မည်သည့်နေရာက ရယူထားပါသလဲ?
ပြည်တွင်းမှ စိတ်ချရသော ကုန်စည်ဒိုင်များဖြစ်တဲ့ ဘုရင့်နောင်ကုန်၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ မကွေး၊ မူဆယ်၊ မြ၀တီ၊ သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ UMFCCI အစရှိသော ကုန်စည်ဒိုင်များမှ နေ့စဉ်ရယူထားတဲ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သိလိုရာမေးကဏ္႑မှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မည်သူတွေက ဖြေကြားပေးတာပါလဲ? ဘယ်လောက်မြန်မြန် ဖြေကြားပေးနိုင်ပါသလဲ?
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများကို စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ က ဖြေကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမေးပြီး ၇၂နာရီ(၃ရက်) အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါတယ်။</p>
၆။ ThuTaMyay ၀န်ဆောင်မှုအတွက် မည်မျှ ကျသင့်ပါလဲ?
သုတမြေ၀န်ဆောင်မှုမှ ဖတ်ရှုလေ့လာဖွယ် အကုန်လုံးအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၁၀၅ ကျပ် (၁၀၀ကျပ် + အခွန်၅%)သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ 8834 သို့ TTM ဟု ပေးပို့ထားပါသော်လည်း ThuTaMyayတွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု၍ မရပါ။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ?
(၁) ပထမဦးစွာ ဝန်ဆောင်မှုရရယူခြင်း အောင်မြင်မှုရှိမရှိ စိစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းအောင်မြင်ပါက ရယူမှုအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် SMS ရရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း SMS မရရှိပါက 8834 သို့ ထပ်မံ၍ TTM ဟုပေးပို့ရပါမည်။</p>
(၂) အကြောင်းပြန်သည့် SMS ရရှိသော်လည်း ဆက်လက်၍ အသုံးပြုမရဘဲ ဖြစ်နေပါက အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
(က) သုတမြေဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် အင်တာနက်လိုင်း လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ဖုန်းတွင် အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်ထားပြီး လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေ သို့မဟုတ် အင်တာနက် Pack ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ သိလိုရာမေးကဏ္႑တွင် စိုက်ပျိုးရေးသာမက မိမိသိချင်သော အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်း၍ရနိုင်ပါသလား?
ThuTaMyay တွင် ပါ၀င်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းနို်င်ပါသည်။ သို့သော် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မကိုက်ညီသော မေးခွန်းများကို ပယ်ဖျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ Thu Ta Myay facebook page ကနေ တင်ပေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ application မှာ တင်ပေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေ မတူဘူးလား?
၁၀။ ဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆို အသုံးပြုလို့ရလား?
Android Version 5.0 နှင့်အထက် မည်သည့် Androidဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
၁၁။ တခြား ဆင်းမ်ကဒ်တွေနဲ့ရော သုံးလို့မရဘူးလား?
MPT ဆင်းမ်ကဒ်တစ်မျိုးထဲနဲ့သာ ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ ThuTaMyay application ကို ဖုန်းထဲမှာ uninstall လုပ်လိုက်ရင် ၀န်ဆောင်မှု ရပ်တန့်သွားမှာလား?
Application ကို uninstall လုပ်ရုံဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်ရန် 8834 သို့ “STOPTTM” ဟု ပေးပို့ပါ။
၁၃။ ThuTaMyay application ကို အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါသလား?
ThuTaMyay ၀န်ဆောင်မှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ၀ယ်ယူသူများအတွက် ၇ ရက် အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ အကြောင်းအရာတွေက English လိုလား၊ မြန်မာလိုလား?
အကြောင်းအရာအားလုံးကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်သာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
©2019 ThuTaMyay . All rights reserved.